FBC - Eeyyama Finfinneedhaa fudhatanii magaalota godina addaa keessatti hojjechaa kan turan Oromiyaa galii dhabsiisaniiru
Eeyyama Finfinneedhaa fudhatanii magaalota godina addaa keessatti hojjechaa kan turan Oromiyaa galii dhabsiisaniiru
Finfinnee, Amajjii 02, 2010 (FBC) -Dhaabbilee fi namoota Finfinneedhaa eeyyama fudhatanii magaalota godina addaa keessatti hojjetan seera qabsiisuuf hojjechaa jiraachuu Biiron Daldalaa fi Misooma Gabaa Oromiyaa ibsame.
Namootaa fi dhaabbileen 250 eeyyama hojii kan fudhatan magaalaa Finfinneedhaa ta’ee osoo jiruu, iddoon hojii isaanii magaalota Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinneeti.
Dhaabbilee fi namoonni kanneenis naannichaaf gibira hojii barbaachisaa kaffalaa hin jirani.
Akkaataa hojimaata Abbaa Taayitaa Galiiwwanii fi Guumruukaa Ityoophiyaatin kaffalaan gibiraa teessoo irraatti hundaa'a.
Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Oromiyaatti daayreektarri daayreektoreetii barumsaa fi koomiishinii obbo Simmany Nuguseen, sababii kanaan naannolee fi godinaaleen galii argachuu malan dhabaa akka jiran kaasu.
Daldalaa fi galii waliin wal qabatee akka heera mootummaa federaalaa keeyyata 98tti, qoodinsa galii naannof godhamu irratti ammas rakkoon akka jiru sadarkaa itti aanaa hogganaa biirotti hogganaan koominikeeshinii Biiroo Daldalaa fi Gabaa Oromiyaa obbo Warquu Caalaa ni himu.
Kanaan wal qabatees maqaa dhaabbilee dhuunfaa fi waldaatin sobanii barjaa dhoobbachuun godinaalee fi magaalota Oromiyaa garagaraa keessatti hojjetaa turan addaan baasnee galii isaanii erga hojii jalqabanii kaasanii Finfinneetti galchaa turan naannoo Oromiyaatti akka deebisaniif hojjechaa jirra jedhaniiru.
Gammachuu Beekumaatu gabaase.
Oduuwwan Biroo « Itiyoophiyaa fi Kuubaan hariiroo isaanii caalaa cimsuuf akka hojjatan ibsan	Yuunvarsiitin Salaalee Amajjii 14 fi 15 barattoota haaraa 1744 simata »